Somali News 06.18.21 | KWIT
Reynolds ayaa saxeexay tallaabo booliis taageersan oo sharci laga dhigayo shalay. Waxaa ka mid ah ciqaabaha ciqaabta ee la adkeeyay ee ku saabsan dhaqdhaqaaqyada mudaaharaadka qaarkood.
Olympian iyo Sioux City Shelby Houlihan dhalasho ahaan maanta kuma tartami doonaan tijaabooyinka Mareykanka. Orodyahankan ayaa bayaan ku soo saaray baraha bulshada isagoo sheegay in qareenadeeda ay isku dayeen inay raadsadaan amar deg deg ah oo ay ku ordaan iyagoo sugaya racfaan 4-sano-xayiraad ah oo lagu tijaabinayo daroogada kor u qaadaysa waxqabadka. Amarkaasi ma uusan dhicin, laakiin mustaqbalka ayuu suuragal ahaa. Houlihan waxay ku eedaysay tijaabadan togan inay ku keentay burrito hilib doofaar ah oo ay cuntay 10 saacadood ka hor baadhitaankii bishii Diseembar.
Abaabulayaasha Sabtida ee Beerta maanta waxay ku dhawaaqayaan xoogaa isbeddelo ah xafladda muusikada ee sannadkan. Sababtoo ah hagista hagista CDC ee hadda jirta ayaa ikhtiyaar u noqon doonta kala fogeynta bulshada halka ay suurtagal tahay Tigidhada looma baahna, si kastaba ha noqotee kaqeybgalayaasha waxaa lagula talinayaa inay goor hore yimaadaan.
Dhacdada sanadkan waxay socotaa laba maalmood Grandview Park, July 2 iyo 3.
Tartanka fardaha ee Atokad Park ee Koonfurta Sioux City ayaa loo qorsheeyay ka hor inta caadiga ah 10-ka July.
Jidka, waxaa iska leh Ho-Chunk, Inc. wuxuu ordi doonaa seddex tartan.
Ugu yaraan hal maalin oo tartan ah sanadkii waa in loo sameeyaa Atokad si uu u haysto liisanka.
Ho-Chunk wuxuu la wareegay wadada sagaal sano ka hor iyada oo ujeedadu tahay in la dhiso casino mustaqbalka. Qorshahaasi wuxuu socdaa ka dib codbixiyayaashii la ansixiyay bishii Nofeembar. Ho-Chunk waxay horumarinaysaa casinos ee Koonfurta Sioux City, Lincoln, iyo Omaha.
Somali News 06.17.21
By Person: Ifrah Mosman • Jun 18, 2021
Iowa. Gudoomiye Kim Reynolds wuxuu saxiixay sharci biilka canshuuraha oo looga baahan yahay gobolka inay la wareegto maalgalinta adeegyada daryeelka caafimaadka maskaxda, iyadoo laga saarayo canshuuraha guryaha deegaanka.
Qiyaasta oo sharci noqotay Arbacadii waxay sidoo kale waji gabaysaa cashuurta dhaxalka gobolka sanadka 2025 waxayna u saamaxaysaa dhimista canshuurta dakhliga ee la ansixiyay seddex sano ka hor in la bilaabo Janaayo 2023.